California raccoon (P. l. psora), en:Lower Klamath National Wildlife Refuge in ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်
Ursus lotor လင်းနီးယပ်၊ ၁၇၅၈
ရက်ကွန်းဝံ (Raccoon, /rəˈkuːn/) သည် ဝက်ဝံအမျိုးတွင် ပါဝင်သော တိရစ္ဆာန် တစ်မျိုး ဖြစ်၏။ သို့သော် နောက်ခြေကို မြေပေါ်တွင် ပြားချ၍ လျှောက်ခြင်းမှတစ်ပါး အခြားအမူအရာ အသွင်အပြင်တို့မှာ မတူချေ။ ဝက်ဝံလောက်လည်း မကြီးပေ။ ယင်းတို့ကို မြောက် နှင့် အလယ်ပိုင်း အမေရိက တောတောင်များ၌သာ တွေ့ရ သည်။ သာမန်ရက်ကွန်းဝံသည် နှာဖျားမှ အမြီးဖျားအထိ ၃၂ လက်မခန့် ရှည်၍ ပေါင်ချိန်နှစ်ဆယ်မှ နှစ်ဆဲ့ငါးပေါင်အထိ ရှိသည်။ သန်မာသည့် ခန္ဓာကိုယ်တွင် အမွေးကြမ်းရှည်များရှိသည်။ အမွေး၏အရောင်မှာ မွဲပြာရောင်ဖြစ်၍ အဖျားမည်းသည်။ အောက်ထပ် အမွေး၏အရောင်မှာ အညိုပျော့ရောင် ဖြစ်သည်။ အမြီး တွင် အမွေးထူများ ရှိပြီးလျှင် အမည်းရောင်သည် အရစ်အရစ်နှင့် တည်ရှိ၏။ ရက်ကွန်းဝံ၏ မျက်နှာမှာ မြေခွေးမျက်နှာနှင့် တူသည်။ နှုတ်သီးချွန်သည်။ မျက်စိတဖက်တချက်စီ၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အနက်ကွက်များရှိ၍ ထိုအနက်ကွက်၏ ပတ်လည်တွင် အဖြူရောင်အမွေးများ ရှိသည်။
↑ Fossilworks: Procyon lotor။9February 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 November 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Procyon lotor" (2016). IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T41686A45216638.en.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရက်ကွန်းဝံ&oldid=728306" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။